Umbuzo FSX 747
unyaka 1 8 edlule #1033 by lpklem
Ngaphambi kokuthi ngiqale, ama-kudos e-Air Force One 747-8I isengezo, iyindiza eyengeziwe enhle engifaka emibuzweni emibili yeqembu:
I-1) Ngithole ukuthi ngingayinikeza kanjani inkinobho yokudonsa (i-trigger) yokuba ne-AF1 injini yokudonsela emuva kwe-injini yami kodwa angikwazi ukuthola wonke ama-ruble we-4 ukuze ngihlanganyele kanye lapho kubuyelana? Ngaphandle kwalokho ngithola kuphela ubuncane bokuphindiselwa kwe-10%, hhayi usizo olukhulu ku-6'000ft runway grrrrr
I-2) Nginohlelo lokuqapha ezimbili, umqaphi oyinhloko unesikrini esivamile i-VC njll, owesibili engiwusebenzisayo ekubukweni okuhlukahlukene kwe-Instrument, kuthatha isikhashana ukusetha njalo lapho ngidlala, ngizamile ukonga indiza kanye ngesikhathi sokusetha ungagcini ukusetha kwesikrini kwesibili. Noma iziphi iziphakamiso zizokwaziswa.
Ngiyabonga ngale sayithi, ngiyayithanda!
unyaka 1 8 edlule #1034 by Gh0stRider203
Ngokudabukisayo, angikwazi ukusiza ngalokho yize lokho kungajabulisa. Ngabe wake wahlolwa yinhlanhla noma ngubani FSX Amaqembu kuFB? Ngiyazi ukuthi ngisekuningi futhi kubukeka sengathi banolwazi (ezintweni eziningi ...... nakwabanye basizakala njengama-tits on inkunzi ....).
unyaka 1 8 edlule #1035 by DRCW
Sawubona, FSX ukwabela i-matrix kuyinto ephansi kunalesi izinti zenjabulo kanye negiya elithile lendiza. Kepha ungazama okulandelayo ... Ngena enkinobheni bese ukhiye unika bese uphonsa ngaphansi kwesigaba lapho ubona i-F2 (Inkinobho yokubuyisela emuva) Qokomisa leso sigaba, bese ucindezela ukhiye oyisisekelo kubethe lakho. Uma isabela futhi ubona ilishintsha, inkinobho yesisusa iyoba ukhiye wokubuyisela emuva. Ngikufisela inhlanhla
unyaka 1 8 edlule #1036 by lpklem
Yileyo ndlela engayinike ngayo inkinobho yokujabula ukuze ibuyele emuva ngisho noma ngabe ngibeka ukuphindaphinda kuze kube yilapho i-reverse thrust ingadluli i-10%, umzuzu engikhulisayo ngiyawusebenzisa ukwenza ukulawulwa kwe-joystick ukugxila lapho kuwubuyisa nje ukukhansela ukuguqula nokuguqula ngokuvamile, hhayi ngqo lokho okufunayo kumgijimi wokugibela. Siyabonga ngokufaka kwakho, ngiyakwazisa !!!!
unyaka 1 8 edlule #1037 by DRCW
Yebo, uke wazama ukudonsa okuningi kwenkinobho? Kusebenzele mina, kepha bekuyinkinobho ehlukile kulayini wami wobumnandi. Umcabango nje, kodwa FSX uhlelo olulinganiselwe kule ndawo ..
Isikhathi ukudala page: 0.177 imizuzwana